2011-03-27 ~ Myanmar Express
﻿ ဟိုတလောက ဂျပန်ငလျင်ကြီးနဲ့ ဆူနာမီ ဒီလှိုင်းကြီး ကြုံတွေ့ခိုက်မှာ ဂျပန်ရောက် မြန်မာတွေချင်း ရိုင်းပင်း ကူညီကြပုံများကို ကြားရပြီး ၀မ်းမြောက်ဂုဏ်ယူမိတဲ့အကြောင်း ရေးခဲ့တယ်။ မရှေးမနှောင်းမှာပဲ မလေးရှားပြန် လူငယ်တစ်ယောက်ရေးတဲ့ ကိုယ်တွေ့အဖြစ်အပျက် စာမူတွေကို အမှာစာရေးဖို့ ဖတ်ရင်းနဲ့ မြန်မာတွေချင်း အရေးကြီးတော့ သွေးနီးကြပုံအကြောင်းတွေ တွေးပြီး ကြည်နူးပီတိ ဖြစ်ရတယ်။ သွေးမနီးပါဘဲနဲ့ သွေးစည်းကြအဲဒီအကြောင်းနှစ်ခုက ဆက်စပ်ပြီး သွေးစည်းမှုနဲ့ သွေးနီးမှု အကြောင်းတွေကို ဆက်တွေးဖြစ်သွားတယ်။ လူမျိုးချင်းတူလို့ ဘာသာအယူဝါဒချင်းတူလို့ သွေးစည်းကြတာမျိုး ရှိသလို၊ လူမျိုးတွေ၊ ဘာသာတွေ မတူပေမယ့်လည်း အတွေးအခေါ် အယူအဆချင်း တူညီလို့ သွေးမနီးပါဘဲနဲ့ သွေးစည်း ကြတာမျိုးတွေလည်း တွေ့ရတတ်တယ်။ တစ်ခါတလေ ကျတော့လည်း ကိုယ်နဲ့လူမျိုးချင်း ဘာသာချင်း တူပါလျက်နဲ့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဘယ်လိုမှ သွေးစည်းလို့ မရနိုင် တာမျိုး ရှိသလို၊ လူမျိုးဘာသာ လုံးဝ ကွဲပြားခြားနားနေပါလျက်နဲ့ ဆွေလိုမျိုးလို ရင်းနှီးချစ်ခင်ကြတာမျိုးလည်း ရှိတတ်တယ်။ အကြောင်းရင်းကို သုံးသပ်ကြည့်တော့ အတွေးအခေါ်၊ အယူအဆချင်း ထပ်တူနီးပါး တူညီကြတဲ့အတွက် ဖြစ်တယ်လို့ ကောက်ချက်ချမိတယ်။ အသွေးအရောင် တူညီတဲ့ ငှက်တွေချင်း အုပ်စုဖွဲ့နေကြတယ်။ (Birds of the Same Feather flock together)ဆိုတဲ့ စကားလိုပေါ့။ ဆရာလုပ်ခဲ့လို့မြန်မာပြည်မှာ နှစ်ပေါင်းနှစ်ဆယ်ကျော် ကျောင်းဆရာ လုပ်ခဲ့လေတော့ ကိုယ်ကသားလို၊ သမီးလို သဘောထားခဲ့တဲ့ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ အများအပြား ရှိခဲ့သလို၊ ကိုယ့်ကိုအဖေတို့၊ အဖေကြီးတို့ခေါ်တဲ့ တပည့်တွေလည်း ရှိခဲ့တယ်။ မြန်မာလူမျိုးတွေကြားမှာတော့ ဒီကိစ္စဟာ သိပ်ထူးဆန်းလှတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဆရာသမားကို မိဘနဲ့ တစ်တန်းတည်း ထားလေ့ရှိကြတာကိုး။ထူးဆန်းတဲ့အကျိုးပေးဘ၀အကျိုးပေးကပဲ ထူးဆန်းလို့လားတော့ မသိဘူး။ နိုင်ငံခြားသူ၊ နိုင်ငံခြားသားတွေ ဖြစ်ပါလျက်နဲ့ ကိုယ့်အပေါ် သံယောဇဉ်ဖြစ်ပြီး အဖေလို့ ခေါ်တဲ့သူ၊ အဖေလို သဘောထား ဆက်ဆံသူ လေး၊ ငါးယောက်ထက်မနည်း ရှိခဲ့တယ်။ ဂျပန်လူမျိုး လူငယ် သတင်းထောက်လေးတစ်ယောက်က ဆရာလိုတစ်မျိုး၊ အဖေလိုတစ်မျိုး လေးစားချစ်ခင်ပြီး အမြဲမပြတ် ဆက်သွယ်နေလေ့ ရှိသလို၊ လူမှုရေးနဲ့ ပရဟိတ လုပ်ငန်းတွေ လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ဂျပန်မလေးတစ်ယောက် ဆိုရင်လည်း သူ့အလုပ်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တိုင်ပင်ဆွေးနွေး လုပ်ရုံတင်မက၊ သူ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စ ရင်ဖွင့်စရာတွေ ရှိရင်လည်း မကွယ်မ၀ှက် ရင်ဖွင့်လေ့ရှိတယ်။ ငိုစရာရှိရင်လည်း ငိုပြတယ်။ ဘယ်နိုင်ငံရောက်နေရောက်နေ ခြောက်လတစ်ကြိမ်တော့ ရောက်အောင်လာ တွေ့တယ်။ တစ်ခါတလေ နှစ်လ၊ သုံးလတစ်ခါ ရောက်လာတတ်တယ်။ ပါပါလို့ ခေါ်ပါရစေလို့ ခွင့်တောင်းပြီး အမြဲတမ်းခေါ်တယ်။စာရေးရင်၊ အီးမေးလ်ပို့ရင်လည်း ပါပါလို့ပဲ ရေးတယ်။ မတွေ့ဖူးဘဲနဲ့မြန်မာပြည်မှာ နှစ်အတော်ကြာအောင် အမှုထမ်းခဲ့တဲ့ အနောက်နိုင်ငံသူတစ်ယောက်ဆိုရင် အဖေတစ်ယောက်ကို ဂရုစိုက်သလိုကို ဂရုစိုက်ခဲ့တယ်။ အခု သူ့နိုင်ငံပြန်သွားတော့လည်း အမြဲမပြတ် အီးမေးလ်ပို့ပြီး ကျန်းမာရေးကို မေးမြန်းတယ်။ ဖတ် သင့်ဖတ်ထိုက်တဲ့ စာအုပ်မှန်သမျှ ပို့ပေးရှာတယ်။ သမီးတစ်ယောက်လိုကို စိတ်ထဲမှာ မှတ်ယူထားခဲ့တယ်။ အခုပြောခဲ့သူအားလုံးက လူချင်းတွေ့ဆုံ ရင်းနှီးခဲ့ကြလို့ သံယောဇဉ် ဖြစ်သွားကြတာ။ အခုတစ်ယောက်ကျတော့ လူချင်းတွေ့ဖူးတာ မဟုတ်ဘဲနဲ့ သတင်းကြားနဲ့ ရင်းနှီးချစ်ချင်ပြီး အဖေလို့ ခေါ်ခွင့်တောင်းခဲ့တာ ဖြစ်တယ်။သြစတြေးလျနိုင်ငံ ဆစ်ဒနီ တက္ကသိုလ်မှာ မဟာဘွဲ့တစ်ခုအတွက် ကျောင်းတက်နေတဲ့ ကျောင်းသူတစ်ယောက်ဆီက သူကသိသွားခဲ့တာပါ။ ကာတွန်းဆရာမသူကလည်း ဆစ်ဒနီတက္ကသိုလ်မှာ မဟာဘွဲ့လာတက်တဲ့ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံသူ ဖြစ်တယ်။ သူ့နိုင်ငံမှာ အတော်အသင့် နာမည်ကျော်ကြားတဲ့ ကာတွန်းဆရာမတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ သူကသတင်းကြားနဲ့ ခင်မင် ရင်းနှီးနေပြီး အဖေလို့ ခေါ်ခွင့်တောင်း ရုံမက မြန်မာလို ဖေဖေလို့ ရေးတာပါ သင်ယူပြီး သူ့လက်ရေးနဲ့ ဖေဖေဆိုပြီး ရေးလိုက်ပါတယ်။ (သူ့လက်ရေး နမူနာနဲ့ သူ့ကာတွန်းလက်ရာကို အကဲခတ်နိုင်အောင် ထည့်သွင်း ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်)။ သူက ကာတွန်းဆွဲရုံတင်မက ကဗျာလေးတွေလည်း ရေးပါတယ်။ သူ့ကဗျာလေးတွေနဲ့ ကာတွန်းလက်ရာလေးတွေလည်း ပို့ပေးလိုက်ပါသေးတယ်။ သူကျောင်းပြီးသွားရင် လာဖြစ်အောင်လာပြီး တွေ့မယ်လို့လည်းကတိပေးထားပါတယ်။ အသွေးအရောင်တူတဲ့ငှက်မမြင်ဖူး၊ မတွေ့ဖူးဘဲနဲ့ ရင်းနှီးချစ်ခင်တယ် ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်သလား။ လူမျိုးဘာသာမတူ ကွဲပြားခြားနားပါလျက်နဲ့ သွေးသားရင်းချာလို သဘောထားတယ်ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်သလား။ အများစုကတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ထင်ကြမှာပဲ။လောကွတ်အနေနဲ့ ပြော တာပဲ ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ယူဆကြမှာ ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ လောကွတ်အနေနဲ့ ပြောစရာ ဘာအကြောင်းမှ မရှိပါဘူး။ ကိုယ်ကလည်း ဘာမှအရေးပါ အရာရောက်တဲ့သူ မဟုတ်တော့ ဟန်လုပ်ပြီး ပြောနေဖို့ မလိုပါဘူး။ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အပြန်အလှန် အကျိုးမျှော်ကိုးစရာလည်း ဘာမှရှိတာ မဟုတ်ဘူး။ ဒီတော့ ဒီလိုချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုမျိုး ရှိနိုင်တယ်လို့ ယုံတယ်။ အသွေးအရောင်တူတဲ့ ငှက်တွေချင်း အုပ်ဖွဲ့နေလေ့ ရှိတယ်ဆိုတဲ့ စကားအတိုင်းပေါ့။ ရည်မှန်းချက်တူရင်နိုင်ငံခြားသားတွေ ဖြစ်ပေမယ့် စိတ်ဓာတ်ချင်း၊ စရိုက်ချင်း၊ ယုံကြည်ချက်ချင်း၊ ရည်မှန်းချက်ချင်း တူညီကြသူတွေ ဖြစ်ကြတော့ သွေးမနီးပေမယ့် သွေးစည်းနိုင်ကြတဲ့ သဘောလို့ပဲ ယူဆမိတယ်။ ဒီသွေးစည်းမှုက ကျွမ်းဝင်ရင်းနှီးမှုနဲ့ ချစ်ခင်လေးစားမှုတို့ ပေါ်ထွန်းလာတာ ဖြစ်တယ်။ အဲဒီကတစ်ဆင့် သံယောဇဉ်တို့၊ တွယ်တာမှုတို့ ဖြစ်လာနိုင်တယ် မဟုတ်ဘူးလား။ အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံသား ချေဂွေဗားရားဟာ ကျူးဘားလူမျိုးများရဲ့ လွတ်မြောက်ရေး တိုက်ပွဲအတွက် ကက်စထရိုနဲ့ လက်တွဲ တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး နောက်ဆုံးမှာ ဘော်လစ်ဗီးယား လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ဘော်လစ်ဗီးယား လူမျိုးတွေနဲ့ လက်တွဲတိုက်ခိုက်ရင်း ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ ယုံကြည်ချက်ချင်း၊ ခံယူချက်နဲ့ ရည်မှန်းချက်ချင်း တူရင် လူမျိုးတူမှ မဟုတ်ဘူး၊ ဆွေမျိုးတော်မှ မဟုတ်ဘူး၊ ဘယ်သူနဲ့မဆို သွေးစည်းနိုင်တယ်။ ချစ်ခင်ရင်းနှီးနိုင်တယ်။ သံယောဇဉ် ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ယုံကြည်တယ်။ ဓမ္မတာပဲနိုင်ငံခြားရောက် မြန်မာတွေလည်း သာမန်အချိန်တွေမှာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဂရုစိုက်ချင်မှ စိုက်နိုင်ကြလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ဂျပန်ငလျင်ကြီးလို အဖြစ်ဆိုးကြီး ကြုံကြရတဲ့အခါကျတော့ အားလုံးဟာ ဘ၀တူတွေ ဖြစ်သွားကြတယ်။ ဘ၀တူတွေ ဖြစ်တော့ အလိုလိုနေရင်း သွေးစည်းသွားကြတယ်လေ။ ဘ၀ချင်းတူရင်၊ ယုံကြည်ချက်ချင်းတူရင်၊ ရည်မှန်းချက်ချင်းတူရင် အားလုံးဟာ အရေးကြီးတဲ့အခါမှာ အလိုလိုနေရင်း သွေးနီးသွားကြတာဟာ ဓမ္မတာပါပဲ။လူထုစိန်ဝင်း
၁။ ဒီ မြန်မာအမျိုးသမီးကို ဘယ်သူက နိုင်ငံခြားသားနဲ့ အတင်းပေးစားတာလဲ??၂။ ဒီအမျိုးသမီးက တိုင်းတပါးသား ယောင်္ကျားလေးတွေပေါ်မှာမှ ဘာဖြစ်လို့ ထိုင်ချင်ရတာလဲ?? လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာ ဒါကိုပြောတာလား??၃။ ဒီလူတွေကို ဘယ်သူက ဆွဲချင်သလို ဝိုင်းဆွဲခိုင်းတာလဲ?? ဒီမိုကရေစီရချင်တာ ဒီလိုနေဖို့လား??၄။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဘယ်သူက ကြယ်သီးဖြုတ်ခိုင်းတာလဲ?? ကြယ်သီးဖြုတ်တာ ဒီမိုကရေစီလား??၅။ ဒီလူတွေကို ဘယ်သူက ခုံပေါ်မှာ မထိုင်ခိုင်းတာလဲ?? လူ့သားချင်း အခွင့်ရေးတန်းတူဆိုတာ ဘယ်ရောက်ကုန်ပြီလဲ??၆။ ဒီလူတွေကို ဘယ်သူက ကန်တော့ခိုင်းတာလဲ??၇။ ဒီလူတွေကို ဘယ်သူက လက်အုပ်ချီခိုင်းတာလဲ??၈။ ဒီဘုန်းကြီးတွေကိုရော ဘယ်သူက မာတုကာမ ပုံကို ဘုရားဘေးမှာ ထားပြီး ကန်တော့ခိုင်းတာလဲ??၉။ မြန်မာလူမျိုးချင်း လက်အုပ်ချီခံနေရတဲ့ ဒီမြန်မာအမျိုးသမီးက ဘာဖြစ်လို့တိုင်းတပါးသားတွေကိုမှ လက်အုပ်ချီချင်ရတာလဲ?? လက်အုပ်ချီတာ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုလား?? ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကရော နိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့ တွေ့ချိန်တိုင်းမှာ လက်အုပ်ချီခဲ့လား??၁၀။ ဒီလူကြီးကို ဘယ်သူအတင်းအိမ်ထဲခေါ်ပြီး ပြန်မလွှတ်တာလဲ??၁၁။ လွှတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်တွေကို ဘယ်သူတွေက အမြဲပြောပြီး ပြောတဲ့သူတွေကို ဘယ်သူတွေက ပါးစပ်လိုက်ပိတ်နေသလဲ??၁၂။ အမေရိကန်သည် ကိုးကွယ်စရာလား??၁၃။ အမေရိကန်ရဲ့ အကျင့်က ဘာလဲ??၁၄။ ဒီကပြားက ရဲ့ အကျင့်ကရော ??၁၅။ ဒီမြေးဖိုး နှစ်ယောက်ကို ဒီလောက် ကွဲပြားသွားစေတဲ့ အဓိက တရားခံက ဘယ်သူလဲ ?? ၁၆။ မြန်မာ့ အမျိုးသားဖခင်ကြီးရဲ့ မျိုးဆက်ကို မြန်မာနာမည်တွေနဲ့ အဆုံးမသတ်အောင် ဘယ်သူလုပ်ခဲ့တာလဲ??၁၇။ ဘုန်းကြီးတွေကို လမ်းဘေးသစ်ပင်မှာ စာရွက်ကပ်ပြီး ဆွမ်းခံကြွခိုင်းတာ ဘယ်သူလဲ??၁၈။ ဒီလူတွေက ဘယ်ကပိုက်ဆံတွေနဲ့ စားသောက်နေကြတာလဲ??၁၈။ ဒီလူတွေက ဘယ်က ပိုက်ဆံတွေနဲ့ စားသောက်နေကြတာလဲ??၁၉။ ဘာမှအသုံးမတည့်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ပြည်သူတွေဆီ ညာရောင်းတာ ဒီလို စားသောက်ကြဖို့လား??၂၀။ ဘာမှ အနုပညာမပါတဲ့ ဒီပုံကို ပန်းချီကားပါဆိုပြီး မြန်မာ ပြည်သူတွေဆီကို လိုက်ရောင်းတာ စားဖို့သောက်ဖို့လား??၂၁။ လူငယ်တွေ ယောင်္ကျားလေးတွေ စုနေတာ ဈေးရောင်းခိုင်းပြီး ဝင်ငွေရှာဖို့လား??၂၂။ ဒီလူတွေကို နေမပူ မိုးမရွာပဲ ဘယ်သူက ခမောက်တွေစောင်းခိုင်းတာလဲ?? ဒီမိုကရေစီအတွက်လား??၂၃။ ဒီအဘိုးကြီးတွေကို ဘယ်သူက ပင်စင်မပေးသေးတာလဲ??၂၄။ ဒီအဖိုးကြီးတွေကို ဘယ်သူက အိမ်မှာ မအိပ်ခိုင်းတာလဲ??၂၅။ အခါကြီး ရက်ကြီးတွေမှာ ကန်တော့ခံချိန်ကလွဲပြီး တခြား ဘာမှ မလုပ်တတ်ကြတော့ဘူးလား??၂၆။ ပင်စင်မယူသေးတာ ဝေစုတွေ ထပ်လိုချင်သေးလို့လား ??၂၇။ ဒီအဖိုးကြီးကို ဘယ်သူက အိကျီအရောင်မျိုးစုံဝတ်ခွင့် ပိတ်ထားတာလဲ??၂၈။ ဒီလူတွေက တော်လှန်ရေး သူရဲကောင်းတွေတဲ့လား?? ဒီလူတွေကို ဘယ်သူက လမ်းဘေးမှာ ထိုင်ခိုင်းထားတာလဲ?? ဒီမိုကရေစီအတွက်လား??၂၉။ ဒီလူတွေကို ဘယ်သူက သူ့ဘာသူနေတဲ့ ဆိုင်ကယ်ကို ဖျက်ဆီးခိုင်းတာလဲ?? ဒီမိုကရေစီ ရသွားရင် ဘာတွေထပ်ပြီး ဖျက်ဆီးအုံးမှာလဲ ??၃၀။ ဒီလူတွေကို ဘယ်သူက လမ်းဘေးအုတ်ခဲတွေ ထုချေခိုင်းတာလဲ?? ဒီမိုကရေစီရဖို့ အုတ်ခဲတွေထုချေရလား??၃၁။ ဘာမှမသိသေးတဲ့ လူငယ်တွေကို လက်ပတ်တပ်ပေးပြီး တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား အမည်ခံပေးတာ ဘယ်သူတွေလဲ??၃၂။ ဒီလူတွေကို ဘယ်သူက ဒီအလုပ်လုပ်ခိုင်းတာလဲ?? ဘာအတွက်လဲ??၃၃။ ဒီလူကြီးကို ဆိုက္ကားပေါ်မှာ ဘယ်သူအတင်း က ခိုင်းတာလဲ??၃၄။ လူသတ်လက်နက်တွေကိုင်ထားတဲ့ စစ်သည်တွေက မျက်နှာဖုံးတွေ ဘာလို့တပ်ထားကြတာလဲ??၃၅။ နာမည်သေချာမသိတဲ့ ဒီလူတွေကို ဘယ်သူက အတင်းဆန္ဒပြခိုင်းတာလဲ??၃၆။ လေးစားပါတယ် ဆိုတဲ့ သူရဲကောင်းနာမည်ပေးထားတဲ့ လူတွေကို လမ်းဘေးခြေနင်းဖက် မှာ တန်းစီချတာ ဘယ်သူတွေလဲ??၃၇။ ပွဲလုပ်စရာ ခေါင်းစဉ်မရှိတိုင်း ဒီလို ဘာမှန်းမသိတဲ့ ခေါင်းစဉ်တွေ whiteboard ပေါ် ချရေးပြီး ပွဲတွေလုပ်ခိုင်းတာ ဘယ်သူတွေလဲ??၃၈။ ကရင်အိကျီမချွတ်တဲ့...၊ ကရင်လူမျိုးတွေကို အရမ်းချစ်တဲ့ ကရင်မလေးက ဘာလို့ကရင်ပြည်နဲ့ အဝေးကြီးမှာ သွားနေရတာလဲ??၃၉။ ဒီလူတွေက မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေလား?? ကရင်လူမျိုးကို သိပ်ချစ်တဲ့ လူတွေလား?? သူတို့ဝတ်ထားတဲ့ ဝတ်စုံဒီဇိုင်းက ကရင်ပုံပေါက်ရဲ့လား?? နိုင်ငံခြားရောက်နေတာကို ခုမှ ဘာလို့ ကရင်ဝတ်စုံက ဝတ်ချင်ရတာလဲ?? ကရင်လူမျိုးကို သိပ်ချင်တဲ့ ဒီကရင်တွေကို ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ အဝေးကြီးမှာ ဘယ်သူအတင်းနေခိုင်းတာလဲ၄၀။ ဒီလူတွေက ဘယ်နိုင်ငံက ဘာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေလဲ??(ခြေအိပ်နက်နဲ့မွန်ဝတ်စုံ၊ ရှူးနဲ့ ရှမ်းဝတ်စုံ၊ ကုတ်နဲ့ ကရင်ဝတ်စုံ၊ နက်ကတိုင်+ကုတ်+ရှူးနဲ့ ချင်းဝတ်စုံ၊ ရှူးနဲ့ ကချင်ဝတ်စုံ)၄၁။ ဒီမြန်မာလူငယ်တွေက ဘာလို့ ASS (ဖင်) လို့ ဒီမှာ လာရေးရတာလဲ?? ဒီမိုကရေစီဆိုတာ ဒါလား??၄၂။ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဟော်ဟစ်ဆဲဆိုတာ ဒီမိုကရေစီလား ??၄၃။ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ညစ်ညမ်းတဲ့ အပြုအမူကို လုပ်ပြတာ ဒီမိုကရေစီလား ??၄၄။ ဒါက ဘာလုပ်နေတာလဲ?? ဒီမိုကရေစီအတွက်ပဲလား??၄၅။ ဒီလူတွေကရော ဘာလုပ်ကြတာလဲ?? ဒီမိုကရေစီ အတွက်ပဲလား??၄၆။ ဒီလူကြီးကို ဘယ်သူတွေက ဒီအလုပ်လုပ်ခိုင်းတာလဲ?? ဘာအတွက်လဲ??၄၇။ အရှက်မရှိ ကိုယ်လုံးတီးချွတ်ပြီး လမ်းပေါ်ထွက်အော်တာ ဒီမိုကရေစီလား ??၄၈။ ဒီလူကြီးကို ဘယ်သူတွေက ကိုယ်လုံးတီးချွတ်ခိုင်းတာလဲ?? ဘာအတွက်လဲ??၄၉။ ဒီကောင်မလေး မဆုမွန် ကို ဘယ်သူက ဘုန်းကြီးနဲ့ အတင်းကြိုက်ခိုင်းတာလဲ??၅၀။ ဒီကောင်မလေး (မဗေဒါ သမီး မေကိုလတ်) ကို ဘယ်သူအတင်းရိုက်ပြီး ရုရှားကို သွားခိုင်းတာလဲ??၅၁။ ဒီကောင်မလေး (မဗေဒါ သမီး မေကိုလတ်) ကို ထိန်းခဲ့တဲ့ ငယ်နိုင် က အဲ့လိုနေဖို့ သင်ပေးလိုက်တာလား??၅၂။ ဒီလူတွေက ဘယ်အမျိုးနွယ်က ဆင်းသက်ပြီး နိုင်ငံအတွက် ဘာတွေလုပ်နေကြတာလဲ??၅၃။ ဒီကလေးစစ်သားတွေက စစ်တပ်ကလား ??၅၄။ အဖေကို အရမ်းချစ်တဲ့ ဒီကောင်မလေးကို သူ့အဖေနဲ့ အဝေးကြီးမှာ ဘယ်သူက နေခိုင်းတာလဲ??၅၅။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်းစုံက လူမျိုးပေါင်းစုံနဲ့ မတည့်တဲ့ မွတ်စလင်တွေက မြန်မာအတိုက်အခံတွေနဲ့ ဘာကြောင့် တည့်နေရတာလဲ??၅၅။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်းစုံက လူမျိုးပေါင်းစုံနဲ့ မတည့်တဲ့ မွတ်စလင်တွေက မြန်မာအတိုက်အခံတွေနဲ့ ဘာကြောင့် တည့်နေရတာလဲ??၅၅။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်းစုံက လူမျိုးပေါင်းစုံနဲ့ မတည့်တဲ့ မွတ်စလင်တွေက မြန်မာအတိုက်အခံတွေနဲ့ ဘာကြောင့် တည့်နေရတာလဲ??၅၆။ အလံသစ်ကို မကြိုက်လို့လမ်းလည်ခေါင်မှာ ချနင်းကြတာ ဘယ်သူတွေလဲ??၅၇။ အလံဟောင်းကို မကြိုက်လို့ ချနင်းတာ ဘယ်သူတွေလဲ??၅၇။ အလံဟောင်းကို မကြိုက်လို့ချနင်းတာ ဘယ်သူတွေလဲ??၅၈။ အလံဟောင်းကို မကြိုက်လို့ မီးရှို့တာ ဘယ်သူတွေလဲ??၅၈။ အလံဟောင်းကို မကြိုက်လို့ မီးရှို့ကြတာ ဘယ်သူတွေလဲ??၅၉။ ကိုယ့်နိုင်ငံအလံကိုတော့ ချနင်းပြီး သူများနိုင်ငံအလံကို လွှင့်ထူဆန္ဒပြတာ ဘယ်သူတွေလဲ??၆၀။ ထမိန်ဝတ်နဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီးကို အမေရိကန်အလံ ဘယ်သူလွှင့်ခိုင်းထားတာလဲ??၆၁။ ဒီတိရစ္ဆာန်ကို ဘယ်သူတွေက အလံပေါ်တင်ပြီးလွှင့်ချင်နေကြတာလဲ??၆၂။ ကိုယ့်နိုင်ငံအလံကို သူများနိုင်ငံသားတွေ ချနင်းအောင် ဘယ်သူတွေလုပ်နေကြတာလဲ??၆၃။ ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်နဲ့ မြန်မာဆိုတဲ့ သိက္ခာကို နိုင်ငံတကာကြားမှာ အရှက်ကွဲအောင်ဘယ်သူတွေလုပ်နေကြတာလဲ??၆၄။ ရုံးရောက် ဂတ်ရောက်နဲ့ မြန်မာလူမျိုးကို အရှက်ရအောင်လုပ်နေတာ ဘယ်သူတွေလဲ??၆၅။ နိုင်ငံနဲ့လူမျိုးကို အရှက်ရအောင် အမျိုးမျိုးလုပ်ပြီး ရသမျှ အထောက်အပံ့တွေနဲ့ ပျော်ပါးစားသောက်နေတာ ဘယ်သူတွေလဲ ??နိုင်ငံရေးသမားတို့အတွက် အမြင်မရှင်းသည့်မေးခွန်းများ (၁) မြန်မာ အတိုက်အခံတို့အတွက် အမြင်မရှင်းသည့်မေးခွန်းများ (၃)အမြင်မရှင်းသည့် မေးခွန်းများ (၄)ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အတွက် မေးခွန်း (၅၅) ခု
မြေနီကုန်း J-donuts တွင် မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွား
[image: မြေနီကုန်း J-donuts တွင် မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွား] ရန်ကုန် ဇွန် ၁၇
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ရန်ကုန် အနောက်ပိုင်းခရိုင် စမ်းချောင်းမြို့နယ် မြေနီကုန်း မ...
အမျိုးသမီးများ ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရေးနှင့် ပြုစု ပျိုးထောင်ရေး အသိပညာပေး ဟောပြော
ရန်ကုန် ဇွန် ၁၈ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသမီးရေးရာ အဖွဲ့ချုပ် အမျိုးသမီးများ ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရေးနှင့် ပြုစု ပျိုးထောင်ရေး လုပ်ငန်းအဖွဲ့ အသိပညာပေး ဟောပြော...